फ्री च्याट कोठा बिना दर्ता, कुनै साइन अप, कुनै डाउनलोड
प्रयोग हाम्रो च्याट कोठा आवश्यकता छैन, कुनै पनि डाउनलोड वा दर्ता साइन अप र प्राप्त गर्न सकिन्छ सीधा देखि को साइट । दर्ता सदस्य सिफारिश गर्न बाटो पहुँच च्याट कोठा प्राप्त रूपमा तपाईं सुरक्षित, प्रयोगकर्ता नाम, र प्रविष्ट गर्न आवश्यक छैन विवरण प्रत्येक समय छ । अन्य सदस्य हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रोफाइल सजिलै थप्न र तपाईं एक मित्र रूपमा, तिनीहरूले भने पठाउन आवश्यक तपाईं अफलाइन. अतिथि आगंतुकों बाहिर भर्न आवश्यक माथि फारम संग आधारभूत विवरण, त्यसपछि मात्र तिनीहरूले प्रवेश गर्न सक्छन् च्याट कोठा.
के के भयो पुरानो च्याट कोठा र किन एक नयाँ परिचय च्याट सफ्टवेयर. दुवै पुरानो च्याट कोठा सफ्टवेयर जहाँ पार्टी र बनाउन परिवर्तन गर्न तिनीहरूलाई दुवै थिए मेहनत र समय छ, त्यसैले अब हामी छ सृष्टि एक कस्टम च्याट सफ्टवेयर हाम्रो आफ्नै हटाउन ती समस्या छ । किन म देख्न मा नै नाम च्याट कोठा धेरै पटक । हाम्रो च्याट सफ्टवेयर छ.
बीटा मा अझै पनि चरण र यो एक बग छ, जो हामी सजग छन् र तय गरिने अर्को आ अपडेट
तपाईं थप्न भिडियो आवाज च्याट सुविधा छ । यो धेरै संभावना छ कि हामी थप्न हुनेछ आवाज च्याट सुविधा निकट भविष्यमा तर सन्दर्भमा ‘भिडियो च्याट’ हामी आउन अझै एक निर्णय । पछि प्रवेश च्याट, तपाईं प्रस्तुत गरिनेछ को एक सूची संग च्याट कोठा चयन गर्न, के गर्न यस्तै छ. नाम को सबै सार्वजनिक आफ्नो निजी च्याट कोठा प्रदर्शित हुनेछ सँगसँगै, मान्छे को संख्या मा प्रत्येक कोठा । तपाईं सामेल गर्न सक्षम हुनेछ कोठा मा क्लिक गरेर बटन. केही च्याट कोठा सक्छ मात्र उपलब्ध हुन पंजीकृत सदस्यहरु । माथि चित्र छ, यो जस्तै दिखेगा के छ एक पल्ट तपाईं सामेल एक च्याट कोठा, तल लोगो हुन् च्याट नेभिगेसन लिंक र पनि समावेश हालको च्याट कोठा गरेको नाम हो । पृष्ठ सूची सबै कोठा तपाईं सामेल र गर्न अनुमति दिन्छ चाँडै स्विच तिनीहरूलाई बीच । बीचमा पृष्ठ देखाउँछ आदानप्रदान सबै सन्देशहरू मा कोठा । सही पक्ष देखाउने को सूची सदस्यहरू जो मा उपस्थित छन् कि कोठा । क्लिक एक सदस्यको नाम सही-पक्ष सूची देखाउन हुनेछ ‘प्रयोगकर्ता’ विकल्प छवि देखाइएको रूपमा माथि र प्रत्येक विकल्प तल बताए छन् । उल्लेख गर्न अनुमति दिन्छ उल्लेख सदस्य मा आफ्नो सन्देश, र यो हाइलाइट प्रकट हुनेछ.
टाइप गरेपछि आफ्नो सन्देश चयन, विकल्प पठाउन हुनेछ आफ्नो सन्देश
एक लेकानेखुसीगर्छ छ मात्र तपाईं दृश्यात्मक र व्यक्ति यो पठाएको थियो । निजी सन्देश यो विकल्प पठाउन हुनेछ, ‘निजी च्याट अनुरोध’ व्यक्ति चयन र शो मा आफ्नो ‘अलर्ट’. दृश्य प्रोफाइल यो विकल्प मात्र देखाउँछ लागि दर्ता सदस्य र तपाईं हुनेछ आफ्नो प्रोफाइल पेज छ । बेवास्ता विकल्प तपाईं गर्न अनुमति दिन्छ हेर्नुहोस् कुनै पनि सन्देश पठाएका व्यक्ति तपाईं उपेक्षा गरिन्छ । अन्य बाँकी मेनु देखाउनुहोस् केही आधारभूत जानकारी बारे सदस्य । उपलब्ध विकल्प मा सेटिङ पेज रूपमा तल छन्: नाम रङ नाम उपनाम गरेको रंग र प्रकट हुनेछ अरूलाई चयन गरिएको रङ । एक यादृच्छिक रंग छान्नुभएको लागि पूर्वनिर्धारित जब तपाईं सामेल च्याट. फन्ट आकार, फन्ट आकार विकल्प परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ कुराकानी फन्ट आकार छ । सिस्टम सन्देश यो विकल्प गर्न अनुमति दिन्छ तपाईं देख्न वा लुकाउनुहोस् ‘प्रयोगकर्ता प्रवेश कोठा’ र ‘प्रयोगकर्ता कोठा छोडेर’ सन्देश. ब्लक प्रयोगकर्ता यो सूचीमा सदस्यहरु को तपाईं अवरुद्ध गरेका छन्, र तपाईं अनब्लक गर्न सक्छन्, तिनीहरूलाई देखि यहाँ ।
← म छु एक लागि देख गम्भीर र निष्कपट सम्बन्ध म छु त्यसैले पूरा गर्न इच्छुक छ ।
र मेक्सिकन डेटिङ अनलाइन भिडियो च्याट बिना दर्ता →